Saturday June 24, 2017 - 05:47:18 in Wararka by Super Admin
Sawirro lagu faafiyay Bogga internetka Taliska ciidanka Mareykanka qaaradda Afrika (AFRICOM) ayaa muujinayay sarkaal American ah oo salad tujinaya saraakiil Soomaali ah arrinkaas oo dad badan ka yaabiyay.
Ninka Mareykanka ah ee Imaamka unoqday Saraakiisha DF-ka ayaa magaciisa lagu sheegay Seyful islam, waxay aheyd arrin jees jees ah oo lagu bahdilayay kuwa sheeganaya ciidanka Qaranka Soomaaliya.
Sida Muuqata Trump ayaa Soomaaliya usoo diray Saraakiil Mareykan ah oo islaam la been abuuray baraya askarta iyo madaxda dowladda Federaalka, sidee qof sheeganaya Muslim uu salaad ugu daba xiranayaa askari Mareykan ah oo la ogyahay sida ay ula dagaallamayaan islaamka iyo muslimiinta.
Dad badan ayaa aaminsan in tani tahay ihaano iyo bahdil ku socota Soomaalida balse doqonimada iyo diin darrada saraakiisha DF-ka way garan waayeen in ay iska diidaan in sarkaal Mareykan ah ay ku daba tukadaan waxaaba kasii daran in sawirro laga qaaday oo warbaahinta lagu faafiyay.
AFRICOM waxay sheegtay in arrintan ay ka dhacday xera melleteri oo ciidamo Mareykan iyo Soomaali ah uga suganyihiin magaalada Muqdisho waxaana loo badinayaa in goobtu ay tahay Xalane ama garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Xamar.
Tan iyo markii uu madaxweyne unoqday dowlada Federaalka Soomaaliya ayay madax iyo saraakiil Mareykan ah kusoo qulqulayeen waxaana loo sababeynayaa muwaadin American ah oo Soomaaliya madax ka noqday, Farmaajo ayaa xusul duub ugu jira sidii dhaqanka Mareykanka ugu faafi lahaa soomaaliya arrinkaas oo aan la ogeyn sida uu ku suurtageli karo maadaama soomaalidu ay yihiin dad muslimiin ah 100%.